Mpanamboatra sy mpamatsy hety | Orinasa hety momba ny biby any Sina
Ity hety ity dia miendrika vita amin'ny vy tsy misy fangarony, miaraka amin'ny taha 70-80%, ary tsy hisintona na handray ny volo rehefa manapaka.
Ny velarana vita amin'ny haitao vita amin'ny firaka titanium vita amin'ny vakum, izay mamirapiratra, tsara tarehy, maranitra ary mateza.
Ity hety ity dia miova ho mpanampy tsara indrindra amin'ny fanapahana ny volom-borona matevina indrindra sy ny fikorontanana mafy indrindra, izay mahatonga ny fikolokoloana ho tsara kokoa.
Ny hety miahy ny henan'omby dia mety amin'ny hopitaly biby fiompy, salon na biby fiompy, ary koa alika, saka ary fianakaviana hafa. Afaka ny ho tonga mpanao hatsarana matihanina sy fitaovana fikolokoloana biby ao an-trano ianao mba hitsitsiana fotoana sy vola
Nify 23 eo amin'ny lelan-tohotra miendrika volo no mamorona hety manety volo biby fiompy.
Ny hety mihety volo biby dia natao indrindra ho an'ny manify. Azo ampiasaina amin'ny fametahana tsotra ihany koa, mety amin'ny karazana volom-borona rehetra. Ny ravina maivana sy malama dia mahatonga ny fanapahana alika saro-pady azo antoka sy mora, ary na iza na iza afaka mampiasa azy io hanapahana volo.
Miaraka amin'ny hety fanapahana volo biby maranitra sy mahomby ity dia ho hitanao fa tsy sarotra mihintsy ny manaingo ny biby fiompinao.
Scissor momba ny fikolokoloana alika matihanina
Ny hety hety miahy ny biby dia misy hety mahitsy, hety hety nify, hety miolakolaka ary borosy mahitsy. Miaraka amin'ny kitapo hety izy io, eto daholo izay ilainao.
Ny sety hety miahy ny biby dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Ny hety dia maranitra avo, mateza ary mahery ny tohotra raha ampiasaina maharitra.
Ny fingotra amin'ny hety dia tsy vitan'ny hoe mampihena ny tabataba mba hahazoana antoka fa tsy hatahotra ny biby fiompy, fa tsy hanimba ny fikosohan-tanana.
Ny hety scissor fikolokoloana biby dia tazomina ao anaty kitapo, manamora ny fitondrana sy ny fitazonana azy ireo. Ity sety ity dia mifanaraka amin'ny filan'ny fikolokoloana ny biby fiompy sy ny fepetra takiana.
hety miendrika alika miolakolaka
Ny hety miendrika alika miolikolika dia tsara amin'ny fametahana ny loha, sofina, maso, tongotra malemy ary paoketra.
Ny sisin'ny hareza maranitra dia manome ny mpampiasa traikefa fanapahana milamina sy mangina, rehefa mampiasa hodi-damba miambina alika sitrana ianao dia tsy hisarika na hisintona ny volon'ny biby.
Ny famolavolana firafitry ny injeniera dia ahafahanao mihazona azy ireo tsara sy mampihena ny tsindry amin'ny sorokao. Ity hety miendrika alika miolakolaka ity dia miaraka amin'ny sisin-tànana sy ankihiben-tànana mba hampidirina am-pelatanan-tànana amin'ny tananao tsara rehefa manapaka.